यस्ताे छ पैसा फल्ने रुख ! « Deshko News
यस्ताे छ पैसा फल्ने रुख !
वास्तवमा पैसा कमाउन सजिलो छैन । भनिन्छ पैसा रुखमा फल्दैन । तर यो दुनियामा यस्तो रुख पनि छ, जसमा पैसा फल्दछ । जहाँ एउटा देशको मात्र कहाँ हो र अन्य देशको पनि पैसा फल्दछ । तपाइँले यसरी रुखमा पैसा फलेको माथिकाे तस्वीरमा प्रष्ट देख्न सक्नुहुन्छ ।
त्यसैले रुखमा बेलायती तथा अन्य विदेशी सिक्का पनि टाँसिएका छन् । यहाँ कुनैपनि जोडी गएर रुखमा सिक्का टाँस्नाले मानव जोडीको सम्बन्ध अटूट हुने मान्यता छ । एजेन्सी